Inyikima EHaiti | Incwadi Yonyaka Ka-2015
Ulwando Kwintsimi YesiTshayina
Ngo-2005, isebe lamisela uTin Wa Ng, umzalwana oliTshayina owayeseBheteli, ukuba aye kuba nguvulindlela okhethekileyo kwintsimi enkulu yesiTshayina. Lo mzalwana wayezalelwe waza wakhulela eDominican Republic. Abazali bakhe bafudukela eSanto Domingo besuka eTshayina.
NgoJanuwari 1, 2008, kwasekwa ibandla lesiMandarin saseTshayina eSanto Domingo, kwaza ngo-2011 lasekwa eSantiago. Abavakalisi abayi-70 kuquka oovulindlela abathe ngxi abayi-36 kunye noovulindlela abangabancedani abaliqela baqhuba izifundo zeBhayibhile ezimalunga ne-76 ngenyanga.
Ukukhangela Abafundi Abathetha IsiNgesi
Ngo-2007, babeyi-27 466 abavakalisi ababephuma intsimi kumabandla ayi-376 ibe kwakuqhutywa izifundo zeBhayibhile eziyi-49 795. Noko ke, lalingekho ibandla lesiNgesi nangona babeliqela abantu ababesithetha. Ngenxa yoko, ngoAprili 2008, isebe lathumela abathunywa bevangeli uDonald noJayne Elwell eSanto Domingo ukuze baseke iqela labathetha isiNgesi. Igcuntswana labavakalisi ababevutha yinzondelelo laqala ngokwenza uhlolisiso lokuqonda apho bahlala khona abantu abathetha isiNgesi. Emva koko laceba indlela elaliza kuyisebenza ngayo intsimi ukuze lishumayele kangangoko.
Ngenxa yemizamo yaba bazalwana, iqela lesiNgesi laseSanto Domingo laqhubeka likhula, ibe ngoJulayi 2009 kwasekwa ibandla labavakalisi abayi-39. Kwenziwa okufanayo nakwezinye iindawo zelo lizwe. NgoNovemba 2011, kwakukho amabandla esiNgesi asixhenxe neqela elinye kwela lizwe.
Inkosikazi Esisithulu Nekwayimfama Ikhonza UYehova
Uvulindlela okhethekileyo uthetha noLorys ngezandla
ULorys, onesifo esibangela ubumfama nokuba sisithulu wakhula engenabazali. Wazalwa esisithulu ibe xa wayeneminyaka eyi-16 amehlo akhe aqalisa ukuba norhatyazo. Emini ubona luzizi kodwa ebusuku uyimfama mfa. Xa selitshonile ilanga uthetha nabantu ngokubampampatha.
Xa wayeneminyaka eyi-23 uLorys wadibana nenye indoda nomfazi wayo abangoovulindlela abakhethekileyo. Ngelo xesha wayehlalisana nendoda esisithulu yaye benentombazana enonyaka neyayisiva. ULorys waya kwiintlanganiso ibe wayithanda into awayifundayo.
ULorys wakhawuleza wayitshintsha indlela awayephila ngayo. Ngokomzekelo, xa weva ukuba ukuhlalisana kwakhe akwamkelekanga, wathetha nale ndoda wayehlalisana nayo ngokubaluleka kokutshata ngokusemthethweni waza wayichazela ukuba yena akasoze angayithobeli imithetho yeBhayibhile. Yothuka xa imbona ethetha phandle ngolu hlobo yaza yavuma ukumtshata.
Emva kokuba betshatile uLorys waba ngumvakalisi waza wabhaptizwa emva nje kwexesha elingephi. Ukanti ukufunda kwakhe iBhayibhile namaNgqina kwamnceda watsho wafunda neNtetho Yezandla YaseMerika. Ukususela ngoko ebefundisa intombi yakhe intetho yezandla nenyaniso.
Inyikima Intlitha IHaiti
Abantu baseDominican nabaseHaiti soze bamlibale uLwesibini kaJanuwari 12, 2010. Kaloku ngaloo mini iHaiti yantlithwa yinyikimakazi. Ngoko nangoko iQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova layalela iofisi yesebe laseDominican Republic ukuba ithumelele iofisi yesebe laseHaiti imali yokunceda. Ekubeni kwakuza kuthunyelwa intywenka yemali, kwathunywa ingxilimbela yogqirha waseBheteli, uEvan Batista, indod’ apha eziimitha eziyi-1.90 ubude neekhilogram eziyi-127 ubunzima.
Isigqibo sokuthuma uMzalwan’ uBatista kwathi kanti sesona-sona, kuba wathi xa efika kumda wala mazwe waxelelwa ukuba bafuneka ngokungxamisekileyo oogqirha. Abantu abaninzi ababonzakele kwinyikima babesisiwa kwiHolo yeNdibano engakwiofisi yesebe laseHaiti ukuze banyangwe. Xa abazalwana baseHaiti beva ukuba kanti uMzalwan’ uBatista lo uthunyiweyo ngugqirha wesebe, bafowunela isebe laseDominican Republic becela ukuba akhe ahlale nabo. Abazalwana bavuma, ibe kwatsho kwaqala iphulo elikhulu lokunceda abazalwana baseHaiti—emva kweeyure intlithile inyikima.
Abazalwana bakhawuleza baya kunceda eHaiti emva kwenyikima ka-2010
Iofisi yesebe laseDominican Republic yakhawuleza yaqhagamshelana noosomashishini eqhele ukuthenga kubo ukutya. Ngenxa yoko, kwathengwa iikhilogram ezingaphezu kweziyi-6 800 zerayisi neembotyi nokunye ukutya zaza zathunyelwa eHaiti ngo-2:30 ngesifingo, ngoLwesine ngoJanuwari 14—yaye kuthiwa olu yayiluncedo lokuqala ukufika emdeni luvela kwelinye ilizwe. Kwangaloo mini, oogqirha abathathu baseDominican Republic bahamba iiyure ezisixhenxe besiya kwisebe laseHaiti. Bafika ebusuku, kodwa ke kunokuba baye kulala baya ngqo kwabo babonzakele baza basebenza de kwasezinzulwini zobusuku. Ngengomso kwakusele kufike abanye oogqirha nabongikazi abane ababevela eDominican Republic. Abonzakeleyo batyandwa nangona iimeko zazimbi, kusetyenziswa amagumbi ayenziwe buphuthuphuthu kwiHolo yeNdibano. Kwisithuba esingangeveki aba basebenzi bayi-12 babesele bencede abantu abangaphezu kwe-300.
Abantu abonzakele kakhulu babethunyelwa eDominican Republic imihla ngemihla ukuze banyangwe khona. Maxa wambi, kwaiimoto ezazise izinto zokunceda eHaiti zaziye zibalekise iingxwelerha kwizibhedlele ezikulo lonke elaseDominican Republic. Isebe lathumela aMaqela Atyelela Abaguli ukuze akhuthaze abonzakeleyo nokuze aqiniseke ukuba bafumana amayeza nezinye izinto. Amabandla wona anceda amalungu entsapho awayepheleke abantu abonzakeleyo ngokutya nendawo yokulala.
AmaNgqina kaYehova asasaza ngaphezu kweekhilogram eziyi-450 000 zezinto zokunceda, kuquka neepleyiti ezinokutya eziyi-400 000
Ukuzibhokoxa kwabantu bakaYehova emva kwale ntlekele bubungqina obuhle bamazwi akwiMizekeliso 17:17, athi: “Iqabane lokwenyaniso lithanda ngamaxesha onke, yaye lingumzalwana ozalelwe ixesha lokubandezeleka.” Maninzi amava abonisa ukuba uYehova uye wabaxhasa abantu bakhe abanyanisekileyo, esebenzisa umoya wakhe namanye amaKristu, naxa sele bejongene nokufa. Kwaqengqeleka iinyanga kuncedwa abazalwana ababengamaxhoba. AmaNgqina kaYehova asasaza ngaphezu kweekhilogram eziyi-450 000 zezinto zokunceda, kuquka neepleyiti ezinokutya eziyi-400 000. Abazalwana noodade abayi-78 abasebenza kwezonyango nababevela kumazwe ahlukahlukeneyo kunye namatsha-ntliziyo amaninzi, banikela ngexesha nobuchule babo. *
^ isiqe. 1 Ukuze ufumane iinkcukacha, funda uVukani! kaDisemba 2010, kwiphepha 14-19.